HAHAZAKANA FAHORIANA NY FINOANA | FJKM Amboniloha
HAHAZAKANA FAHORIANA NY FINOANA
Tsarovana amin’ity volana Aogositra ity indray ny amin’ireo maritiora izay niaritra fahoriana ary nahafoy ny ainy noho ny amin’ny fijoroana ho vavolombelon’ny finoana ny Tompo Jesoa. Marina fa tsy hita miharihary toa ny tamin’ny androdry Rasalama ny fanenjehana ny kristiana ankehitriny. Saingy firifiry moa ireo mpanompon’Andriamanitra no mizaka fahoriana noho ny amin’ny fijoroana amin’ny fahamarinana, mivelona sy miaina amin’ny Tenin’Andriamanitra ka mitory izany eo amin’ny fiarahamonina misy azy, any am-pianarana, any amin’ny toeram-piasàna? Anisan’izany va ianao ? Tena halan’izao tontolo izao ?! Aza kivy, aza ketraka fa Mahereza e ! Ampahatsiahivin’ny Tompo anao ireto :
Ny fahoriana sy ny fanenjehana dia efa nambaran’ny Tompo fa tsy maintsy misy: tombony ary natao hozakain’izay rehetra manara-dia ny Tompo io (Mar.10, 30). Hoy indrindra Jesoa: “Raha misy tà hanaraka Ahy, dia aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny Hazo fijaliany ka hanaraka Ahy” (Mar.8, 34). Izao anefa: “Ety amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matokia fa Izaho efa naharesy izao tontolo izao” (Jao.16,33); “Ento ny ziogako, ka mianara Amiko. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako.” (Mat.11,29.30). Hoy koa Paoly apostoly “Tsy misy fakam-panahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan’olombelona; kanefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo; fa momba ny fakam-panahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany.” (I Kor.10, 13)
Tsara kokoa ny mitondra fahoriana amin’ny fanaovan-tsoa noho ny amin’ny fanaovan-dratsy (I Pet.3,17) ary sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny Fanjakan’ny lanitra. Sambatra ianao raha haratsian’ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anao noho ny amin’ny Tompo. Mifalia sy miravoravoa, fa lehibe ny valim-pitianao any an-danitra. (Mat.5, 10-12). Tsy ho anao irery mantsy no antony ijoroanao fa ho famonjena ny hafa indrindra koa (Jao.11,42).
Ireto misy toro-hevitra avy amin’ny Soratra Masina tsara arahinao hoentinao miatrika fahoriana hahazakanao azy:
Tsarovy fa tsy ny soa ihany no horaisintsika avy amin’Andriamanitra fa ny ratsy koa (Joba2,10);
Aza matahotra, aza mangorohoro fa manamasina an’I Kristy Tompo ao am-ponao (Jer.1,8.17; I Pet.3,15);
Aza hadinoina fa mpanompon’Andriamanitra sady irak’Andriamanitra ianao. Ampahatsiahivo ny olona izay itondranao ny hafatr’Andriamanitra izany (Jer.26,12; Jao.11,42; II Kor.5, 20);
Manàna fieritreretana tsara. Mivavaha ho an’izay manenjika anao. Misaora fa aza manozona azy (I Pet.3,16; Rom.12,14);
Aoka ho vonona mandrakariva hamaly izay manontany anao ny amin’ny anton’ny fanantenana ao anatinao, nefa amin’ny fahalemem-panahy sy ny fanajàna (I Pet.3,15.16);
Misaora raha tevatevaina; Mamalia teny moramora raha tenenina mafy (I Kor.4,12.13);
Aoka ho fantatrao fa ny olona mafy hatoka, tsy mino ary tsy te hankato fa mandika ny didin’Andriamanitra no manenjika sy mitora-bato ny irak’Andriamanitra (II Tan.24,19.20);
Tsarovy koa fa izay manenjika na mampahory mpanompon’Andriamanitra dia hanody azy izany (ny rà marina) ary ny Tompo no mamaly azy (Jer.26, 15; II Tan.24,20; Mat.27, 25)
Mifalia amin’ny fanantenana àry. Miareta amin’ny fahoriana. Mahareta amin’ny fivavahana (Rom.12, 12). Ny fahoriana dia mahatonga faharetana; ary ny faharetana dia mahatonga fahatsaram-panahy voazaha toetra izay mahatonga fanantenana. Ao anatin’ny fahoriana na sedra mahamay no anehoan’Andriamanitra aminao ny Voninahiny sady anefeny anao ho mpanompo mahatoky Azy hatramin’ny fahafatesana. Fa raha mitandrina ny Teniny ny amin’ny faharetana ianao dia homeny anao ny satroboninahitra fiainana (Apo.3, 10.11).
MANANA NY HEVITRA HIHEVERANA ANAO NY TOMPO. TSY HITONDRA LOZA FA FIADANANA HO ANAO.
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 7 août 2015